‘जेकब्सन्स ओर्गन’को सहायताले सिकार पत्ता लगाउने सर्प « Tuwachung.com
१. एमालेको संगठित सदस्यता पाएको ३० वर्षपछि मन्त्री
२. दिक्तेलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको २४ घन्टा
३. भुक्तानीका लागि धाउँदा–धाउँदै हैरान
४. लेबनानबाट फर्केपछि गायन
५. मन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलमै आल्चाको तीनपाने रक्सी
६. खोटाङबाट सालिन्दा ४ करोड बाहिरिने
७. माल्खुको स्वप्निल बगैंचामा फुल्दै गरेको सुविन्द्रका सुन्दर सपना
८. हलेसीमा १४ दिनको भेटी ५ लाख ९९ हजार ४४०
९. प्रेमिल गीतका कुशल शब्द–संयोजक
१०. ‘पत्रकार कमजोर भए मुलुक असफल’
११. १७ दिनको भेटी ८ लाख ७४ हजार १६५
१२. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
तुवाचुङ संवाददाता	२०७७ फाल्गुन २०, १७:१२
सर्पले सुन्न सक्दैन । उसले आफ्नो शरीरले जमिनको कम्पन मापन गरेर आफूवरिपरिको स्थिति जानकारी लिन्छ । त्योभन्दा भरपर्दो औजार हो– उसको जिब्रो ।
सानो छँदा हामीमध्ये धेरैको धारणा के हुन्थ्यो भने बीचमा काटिएको सर्पको अनौठो जिब्रोले मानिसलाई टोक्छ । यो धारणा बिल्कुल गलत हो । सर्पको काटिएको जिब्रो हाम्रा लागि हानिकारक हुन्न । उण्सले आफ्नो अनौठो जिब्रो परिस्थति आँकलन गर्न प्रयोग गर्छ ।
सर्पको तालुमा दुई स–साना अंग हुन्छन् । ती अंगलाई अंग्रेजीमा ‘जेकब्सन्स ओर्गन’ भनिन्छ । सर्पले आफूवरिपरिको वस्तुस्थिति जानकारी लिन जिब्रो तीव्र गतिमा भित्र–बाहिर गरिरहेको हुन्छ । प्रत्येकपटक सर्पले जिब्रो बाहिर निकाल्दा हावामा रहेका रासायनिक कण गिलो जिब्रोमा टाँसिन्छन् । जिब्रो मुखभित्र छिराउँदा टाँसिएका कणलाई सर्पले ‘जेकब्सन्स ओर्गन’मा राख्छ । ‘जेकब्सन्स ओर्गन’ले ती कणको पहिचान गरी सिकार नजिक छ वा छैन ? कति टाढा छ ? हावाको तापक्रम कति छ भन्ने निक्र्यौल गर्छ ।
जेकब्सन ओर्गनले जिब्रोका दुवै चुच्चोमा सिकारको गन्धका कण प्राप्त नगर्दासम्म सर्पले सिकारको पिछा गरिरहन्छ । जब जिब्रोको एकमात्र चुच्चोमा सिकारको गन्ध पाउँछ, तब सोही दिशातिर सर्प हानिन्छ । दुवै चुच्चोबाट सिकारको गन्ध हराउँछ तब सर्पले आफ्नो टाउको यताउता हल्लाएर फेरि गन्धका कण खोजी गर्छ ।
मुख्यमन्त्री राईसमक्ष होलेसुङ समूहको मागपत्र
दुर्छिम (खोटाङ) । हलेसीका ऐतिहासिक शासक होलेसुङ र हलेसीगढीलाई पर्यटन र समृद्धिसँग जोड्न अनुरोध गर्दै
मन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलमै आल्चाको तीनपाने रक्सी
बुइपा (खोटाङ) । सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक खोटाङ टेकेकी उषाकला राईले आल्चाको तीनपाने रक्सी
१७ दिनको भेटी ८ लाख ७४ हजार १६५
हलेसी (खोटाङ) । हलेसी आइपुगेका दर्शनार्थीले १७ दिनमा चढाएको भेटी गणना गर्दा ८ लाख ७४
विपत्तिमा परेकालाई उद्धार गर्ने रोबोट
दुर्छिम (खोटाङ) । युद्ध र प्राकृतिक प्रकोप मानव जीवनमा अभिशाप मानिन्छन् । कहिले सामुद्रिक आँधी,
हलेसीमा १४ दिनको भेटी ५ लाख ९९ हजार ४४०
हलेसी (खोटाङ) । हलेसी आइपुगेका दर्शनार्थीले १४ दिनमा चढाएको भेटी गणना गर्दा ५ लाख ९९
बम विस्फोट गर्दै वैज्ञानिकको घर ध्वस्त पारेपछि हिटलरको रिस मत्थर
क्वान्टम सिद्धान्तको प्रतिपादन भौतिक विज्ञानको इतिहासमा एक युग परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण घटना हो । यसको
मिस मगर २०१४ को ताज पहिरिएपछि सरिष्मा राम्जाली मगर मोडलिङमा लागिन् । म्याग्दीकी मगर कल्चरल